Matongerwo eNyika, 24 Mbudzi 2017
Chishanu 24 Mbudzi 2017
VaMudzuri Vanoti VaMnangagwa Vanofanirwa Kuvandudza Mitemo yeSarudzo
Vagari vemuMasvingo vapemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika wechipiri, VaEmerson Mnangagwa, nhasi vachiti vari kufarira kuti kwauya pfungwa itsva dzinogona kuchinja mararamiro evanhu anga ashata.
VaMnangagwa Vorumbidzwa Zvikuru Zvichitevera Mashoko Avataura
Vanhu vakawanda vanoti vafarira zvikuru mashoko ataurwa naVaMnangagwa zvichitevera kutoreswa mhiko.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vaudza mhomho yevanhu yaungana pakugadzwa kwavo kuti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya, uyewo vavimbisa kuti vachashanda nevanhu vese zvisinei kuti ndevebato ripi.
VeMabhizimusi Votambira neMufaro Vimbiso yaVaMnangagwa
Mumashoko avo ekutambira kugadzwa kwavo semutungamiri wenyika, VaMnangagwa vavimbisa kuwanisa vanhu mabasa uye kuvandudza mitemo inobvumidza vekunze kutanga mabhizimusi munyika.
Madzimai Ozeya Zvichemo Zvokusvitsa kuHurumende Itsva
Madzimai anobva kumativi mana enyika ari kuzeya zvavari kuda kuti hurumende itsva yagadzwa nhasi iitire vanhukadzi senzira yekuremekedza mabasa avanoita mukusimudzira nyika.
VaMnangagwa Vokurudzirwa Kubvisa Mutongo weRufu
Masangano anorwira konzero dzevanhu munyika anoti ane tarisiro yekuti mutungamiri wenyika mutsva, VaEmmerson Mnangagwa, vachazadzisa chishuwo chavo chekuti mutemo wekutongera munhu rufu ubviswe zvachose.
Masangano eVechidiki Okurudzira VaMnangagwa Kunzwa Zvido Zvavo
Masangano akazvimiririra, vedzisvondo, vadzidzi nevanorwira kodzero dzevashandi vari kuungana muHarare mangwana pasi pe”The National People’s Convention,” kuti veruzhinji vawane mukana wekutaura zvido zvavo negwara ravanotarisira kuti nyika itore.
Mnangagwa Vanoshorerwa Nyaya yeGukurahundi
Apo VaMnangagwa vari kugadzwa kuve mutungamiri wenyika mangwana, vakawanda vanoti VaMngangwa vanofanirwa kutora mukana uyu vogadzirisa nemazvo matambudziko emunyika.
Mamwe Mapato Anopikisa Anoti Haana Kukokwa Kuzoona VaMnangagwa Vachigadzwa.
Apo mutungamiri mutsva wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vari kugadzwa mangwana, mamwe mapato anopikisa anoti haana kukokwa uye acharega kuenda kugungano iri.
Mhuri yaVaItai Dzamara Inofadzwa neKubatana kweVanhu Mukubvisa VaMugabe
Mhuri yemurwiri wekodzero akatsakatika, VaItai Dzamara, inoti inonzwa kufara nekuona nyika yose ichitaura nezwi rimwechete rekuti vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vasiye basa, rinove ndiro shoko rakatanga kutaurwa naVaItai kubva muna 2014.
Vanotengesera muMigwagwa Voita Mari neMireza yeNyika